इटहरी कहिले खुल्छ ? यस्तो छ संभावना - Saptakoshionline
इटहरी कहिले खुल्छ ? यस्तो छ संभावना
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र ०७, २०७७ समय: २:१५:०६
इटहरी । कोरोना संक्रमणको कारण इटहरीमा निषेधज्ञा जारी छ । निषेधज्ञाको कारण इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्र पूर्ण रुपमा ठप्प रहेको छ । गत वर्षको चैत्र ११ गतेबाट नेपालमा सुरु भएको लकडाउन १ सय २० दिनपछि हटेपछि केहि खुकुलो भएको इटहरी बजार क्षेत्रमा एकाएक कोरोना संक्रमणको दर ह्वात्तै बढेपछि निषेधज्ञा जारी गरिएको थियाे ।
एकैदिन १४ जनामा संक्रमण देखिएपछि सुरु भएको निषेधज्ञाको कारण अहिले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मानिसलाई निकै गाह्रो भएको छ भने ब्यापार ब्यवसाय पनि दैनिक रुपमा धरासयी बन्दै गएको छ । अहिले सबैको प्रश्न छ, लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ ? बढ्छ कि बढ्दैन ? कहिले खुल्छ ? यस्तो अवस्थामा अब भदौ ७ पछि इटहरीमा कसरी निषेधज्ञालाई ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा समेत चर्चा सुरु भएको छ ।
नेपालीहरुको महान पर्वहरु समेत नजिकदो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अब बजार क्षेत्रलाई ब्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने माग ब्यवसायीहरुबाट समेत आउन थालेकाे छ । निषेधज्ञा हटाउने चचार् लिलरहदा शनिवार एकै दिन इटहरीमा १४ जना संक्रमित थपिएका छन । इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका ५ जना प्रहरी सहित १४ जना कोरोना संक्रमित थपिएको हो ।यो संगै इटहरीमा कोरोना संक्रमितको संख्या ७८ जना पुगेको छ भने । २५ जना निको भएर घर फर्केका छन । इटहरी क्षेत्रमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार स्थानीय तहहरूमा स्वाब संकलनको दायरा बढाउँदै जाँदा संक्रमितको संख्यासमेत थपिँदै गएकाले सुनसरी जिल्लामा लागू गरिएको निषेधित क्षेत्र भदौ १४ गते सम्म कायम राख्ने सम्भावना रहेकाे छ ।